I-Fibromyalgia kunye neNtlungu ebutsheni [5 Iimpawu eziQhelekileyo zokusa]
I-Fibromyalgia kunye neNhlungu
07 / 03 / 2019 /1 Comment/i udinwe/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia kunye neNtlungu yeNtwasahlobo: Iimpawu ezi-5 eziQhelekileyo zokusa kwaBafumana iFibromyalgia
Ngaba i-fibromyalgia yakho inxulumene nentlungu eyongezelelweyo kunye neempawu zokusa?
Nazi iimpawu ezi-5 zasekuseni eziqhelekileyo eziya kuthi uninzi lwazo ezineFibromyalgia ziyamkele.
I-Fibromyalgia inokuba nefuthe elikhulu ekulaleni ebusuku kunye nomgangatho wokulala - yinyani leyo. Ngaba uhlala uvuka umzimba uqaqanjelwa, udiniwe, ulukhuni ngathi yinduku, izandla kunye neenyawo, kunye neebhegi ezinkulu phantsi kwamehlo? Uninzi lwabaninzi abane-fibromyalgia nabo bayakuvuma oku. Ezi mpawu zasekuseni zinokwahluka - kwaye ezinye iintsasa zibi kakhulu kunezinye. Yiyo loo nto ke sifuna ukukunika ulwazi oluthe kratya malunga neempawu ezihlanu eziphambili kunye nento onokuyenza ukuze ubanciphise.
- Sisonke ngenxa yeentlungu ezingapheliyo
Eli nqaku lihamba ngeempawu ezintlanu eziqhelekileyo zasekuseni kulabo abane-fibromyalgia - ezinye zazo zinokumangalisa. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi kwaye ufumane neengcebiso ezilungileyo.
1. I-Fibromyalgia kunye nokukhathala kwi-Morning
Ngaba nawe uyasokola ukuvuka udiniwe emva kokulala ebusuku? Ukukhathala, ukudinwa kunye nokudinwa ekuseni kuyimpawu yasekuseni yakudala kulabo abane-fibromyalgia. Isizathu esihle sendalo sokuba sivuke sidiniwe xa kuthelekiswa nabantu abasempilweni abaziva bephumle kusasa- silala kakubi.
I-Fibromyalgia yimo engapheliyo ye-rheumatism yezicubu ezithambileyo ezinokudityaniswa ngqo ne:
I-Bruxism (ukugoba izinyo)
ISystem Bone engapheliyo
Uphando (1) ikwabonakalisile ukuba uninzi luneendlela zokulala ezingaqhelekanga eziphazamisana nobuthongo obunzulu. Eli linqanaba lokulala apho ufumana olona phumla kunye nolona luphucukileyo engqondweni nasemzimbeni. Ubuthongo obukhaphukhaphu kwaye obungenasiphelo abukhokeleli kwityala elinye- kwaye ke umntu unokuhlala evuka ediniwe, ekhathazekile kwaye ediniwe.
Nokuba enye yezi ngxaki zilapha ngasentla yanele ukuya nzima ngaphezu kokulala ebusuku. Ukuba uyachaphazeleka liqela labo, njengokubhula, kunye nokungaluki kwithambo, oku kuyakwenza ukuba kube nzima ngakumbi ukulala kamnandi ebusuku.
Abantu abaninzi baxela ukukhululeka kweempawu ukuba benza umthambo olula kunye nokuzivocavoca ngaphambi kokuba balale. Njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Cofa apha ukufunda ngakumbi malunga nezi ntshukumo zentshukumo - okanye ubukele ividiyo engezantsi.
Ukuthambisa kunye nokuziqhelanisa nokwenza umthambo kunokunceda ukuthambisa umzimba wakho kancinci ngaphambi kokuba ulale. Kwividiyo eboniswe ngezantsi, sikubonisa inkqubo yokuzilolonga emihlanu enikezela ukuhamba okungcono kunye nokujikeleza.
Joyina usapho lwethu kwaye ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube (cofa apha) ukufumana iingcebiso zokuzikhulula simahla, iinkqubo zokuzivocavoca kunye nolwazi lwezempilo. Wamkelekile!
2. IAllodynia kunye neFibromyalgia
Emva kokuqwalasela ukuphazamiseka okuqhelekileyo kokulala okuhambelana ne-fibromyalgia, kufuneka songeze ezinye iimpawu ze-fibromyalgia. I-Fibromyalgia ihlelwa ngokubanzi Iindidi ezisixhenxe ezahlukeneyo zentlungu ezinokusinceda ngokuqinisekileyo sihlale siphaphile kwaye siqiniseke ukuba sjijike ebhedini malunga nobusuku bonke.
Uxinzelelo lwengqondo kunye nempembelelo yengqondo ngenxa yokungabikho kokulala yenza ukuba kube nzima ukuphumla. Ukudityaniswa nokwanda kobuntununtunu kwisandi kunye nokukhanya, oku kuthetha ukuba nezinto ezincinci zinokusivusa ngesiquphe ebuthongweni- kwaye zenze kube nzima ukulala kwakhona.
Enye yeentlungu ezisixhenxe ezahlukeneyo umntu anokufumana kuyo kwi-fibromyalgia ibizwa ngokuba yi-allodynia. Ngolu hlobo lwentlungu, ukubamba okuncinci, nokuba kukuvela kwiduvet okanye usana, kungakhokelela kwintlungu ebonakalayo. I-Fibromyalgia ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi "princess kwi-ertyisi" ngenxa yesi sifo se-episodic hypersensitivity apho ukubamba ukukhanya kubuhlungu.
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezinganyangekiyo nezifo ezichitha yonke imihlaKungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi, "Ewe kuphando olunzulu malunga nokuxilonga kubuhlungu beentlungu".
3. Ubushushu beSensitivity, UkuSwebisa kunye neCold Vapor
Ngaba ngamanye amaxesha uvuka ekuseni kubanda ngokupheleleyo okanye kushushu? Thina nge-fibromyalgia siveliswa kukuziva kubanda nobushushu- kwaye ngenxa yokuba buthathaka komzimba wokulawula oku; ukwanda kokubila.
Ukulala phantsi kwe-duvet kwaye uzive kubanda -ukuziva ushushu emva kwemizuzu engama-30, kunokonakalisa ukulala kwabantu abaninzi. Abantu abaninzi bahlala beziva ukuba bayabanda kusasa kangangokuba bayasokola ukuphuma phantsi kweduvet.
Ukuba uneengxaki zokulala, sicebisa ukuba uthumele esifundweni sakho ngokulala. Naliphi na iziphumo (ezifana nokufumanisa i-apnea yokulala) kunokukhokelela kunyango olusebenzayo-njengomatshini we-CPAP wokuphefumla ubuthongo. Ukuzilolonga iintlungu kunye nonyango kunokuba zizitshixo ezibalulekileyo zokuphucula ukulala kwakho.
Uninzi lwabantu lufumana ukuphuculwa komzimba nangokwengqondo ngokuthatha uqeqesho lweqela kwiqula lamanzi ashushu. Unokufunda ngakumbi malunga nendlela esebenza ngayo kweli nqaku lingezantsi.
4. Ukuqina kwekusasa kunye nokuqaqamba emzimbeni
Kuqhelekile ukuba uvuke kwaye uzive uqine kwaye undindisholo emzimbeni kusasa-kodwa ihlala ihlukile kwabo bane-fibromyalgia. Uninzi lwabantu abane-fibromyalgia luchaza olu lukhuni kunye nefuthe njengamandla abomeleleyo kunabantu abasempilweni.
Ngapha koko, kunikwe ingxelo yokuba kunokubaluleka kangangokuba kunokuthelekiswa nentlungu kwimisipha ngabantu abanempilo emva koxinzelelo olukhulu lomzimba. - okanye, nokuba, ingozi encinci yemoto.
Njengoko kwaziwa, i-fibromyalgia inxulumene ngokuthe ngqo kwi-hypersensitivity kwizicubu ezithambileyo kunye nezihlunu. Oku kuthetha ukuba kuya kuba nokuhlala okuncinci kunye nokuxineka ngaphambi kokuba siqinise kunye nekhontrakthi yemisipha. Mhlawumbi uqaphele ukuba uhlala uhlala kwaye uhambisa kancinci? Yi-fibromyalgia efuna oku kuwe.
Ngokutshintsha rhoqo indawo yethu kancinci siya kutshintsha ubunzima kwimisipha. Ekugqibeleni, isikhundla esitsha siza kubangela iintlungu kunye nokubandezeleka. Ke emva koko sihamba kwakhona. Ngelishwa, le yinto ekunokuba nzima ukuyifezekisa ebusuku-yiyo loo nto unokuziva ngathi uqinile kwaye undindisholo kusasa.
Ngaba uyazi ukuba ukutya okufanelekileyo kunokuba nefuthe elihle kwi-fibromyalgia? Ukutya 'kwe-fibromyalgia' kulandela iingcebiso zesizwe zokutya kunye nezikhokelo. Unokufunda ngakumbi ngayo kwinqaku elingezantsi.
Ukuthatha amanyathelo okuzikhusela kwi-Fibromyalgia intlungu kusasa
- Ingcebiso elungileyo: Sebenzisa mat acupressure ngobusuku obungaphambili
Ngaba ungomnye waba bantu bavuka bobabini beqinile kumalungu kunye nokuqina kwimisipha? Sihlala sifumana imibuzo malunga nendlela yokukhulula into esiyibiza ngokuba bubunzima basekuseni. Enyanisweni, into oyenzayo ngokuhlwa ngaphambi kokulala inokubaluleka njengento oyenzayo ekuseni. Zive ukhululekile ukuba uzame ukusebenzisa i-trigger point mat, ekwaziwa njenge mat acupressure (cofa apha ukuze ufunde ngakumbi ngayo - ikhonkco ivula kwifestile entsha yokufunda), malunga nemizuzu engama-60 ngaphambi kokuba ulale. Amanqaku okuphulula imat kufuneka asetyenziswe kwiindawo ezixineneyo kwaye abaninzi bavakalelwa kukuba ibonelela ngokukhululeka komzimba nengqondo. Zama ukusebenzisa i-mat malunga nemizuzu eyi-15-30, kwaye uzame ukufumana isiqhelo sokwenza oku njengenxalenye 'yendlela yakho yasebusuku'. Siyathemba ukuba inokukunceda ufumane iintsasa ezingcono.
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (abanye bavakalelwa kukuba oku kunokuphelisa iintlungu zesihlunu)
5. Izandla ezidumbileyo kunye neenyawo - kunye nokudumba okujikeleze amehlo
Uninzi lwethu luvuka ngokudumba okuncinci ezandleni nasezinyaweni-okanye ngapha nangapha kwamehlo ethu. Oku kunokubangela nentlungu. Omnye akaqinisekanga ngokupheleleyo ukuba kutheni i-fibromyalgia ihlala ibonakala ichaphazeleka koku. Kodwa enye inethiyori ezahlukeneyo.
Izifundo ezithile zophando zibonakalise ubudlelwane kunye nokugcinwa kwamanzi kunye nefibromyalgia. Ke olu luvavanyo lweentlungu ezingapheliyo kubonakala ngathi siphethe amanzi amaninzi emzimbeni kunabanye. Le nto yaziwa ngokuba I-edema ye-idiopathic. Siyakukhumbuza ukuba uxinzelelo kwiigloves (jonga umzekelo apha - ikhonkco ivula kwifestile entsha yokufunda) inefuthe elibhaliweyo kwiintlungu ze-rheumatic ezandleni.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku akubangelwa kukuvuvukala (nangona ezinye iimeko ze-fibromyalgia zibandakanya oku). Kukholelwa nje ukuba kungenxa yokuqokelelwa kokugcwala kweenyawo, izandla kunye nokujikeleza amehlo.
(I-PS-Sithetha ngakumbi ngesi sihloko kamva kwinqaku)
Ukuzivocavoca ngesandla okukhanya kusasa kunokukunceda ekulweni nokudumba kwaye negazi lakho lihambe. Jonga imisebenzi esixhenxe esiyibonisayo kwinqaku elingezantsi.
Funda: - Uqheliso lwe-7 lweOsteoarthritis yesandla
Amayeza okuhambisa amanzi kunye nonyango lwendalo
Kukho iziyobisi ezinefuthe lomchamo-oko kukuthi, sifumana ukuchama rhoqo kunesiqhelo. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu osebenza koku. Kwakhona, kukholelwa ukuba oku kunokunxulunyaniswa nokujikeleza ngokuhlwempuzekileyo kubantu abaninzi abane-fibromyalgia- kwaye kukho umngcipheko ophezulu wokufumana ulwelo ngokungasebenzi okanye ukulala.
Kwiimeko ezininzi, ukudumba okanye ukudumba akunakubangela naziphi na iingxaki -Kodwa kuninzi kunokukhokelela kwiintlungu zombini kunye nobunzima ekusebenziseni izandla ngokufanelekileyo. Iingxaki eziqhelekileyo zibandakanya iintlungu xa unyathela unyawo lokudumba kusasa okanye ubunzima bezakhono ezifanelekileyo zezithuthi ezandleni kwihlumelo lasekuseni (funda: ukuziva uxakekile).
Uninzi luyayazi nengxaki yokusebenzisa izandla ezityibilikayo ukubeka izinto zokwambathisa ukugquma amehlo ukudumba! Ukongeza kumayeza aqhelekileyo, kukwakho ukutya kwendalo okukunceda ukunciphisa intloko. Elinye icebiso elisebenzayo lokutya kukusela i-ginger ngaphambi kokuba ulale okanye ngokukhawuleza nje uvuke ekuseni.
Olunye unyango olunokunceda lubandakanya ukufunxa kwemithambo ye-lymfu. Kukwafanelekile ukukhankanya ukuba amayeza athile kunye neepilisi zeentlungu zinokubangela ukudumba njengempembelelo esecaleni- ke zive ukhululekile ukujonga isihlomelo sakho sonyango ukuba awuqinisekanga.
Ngaba ukhathazwa kukuvuvukala rheumatic? Apha ngezantsi ungafunda malunga namanyathelo asibhozo onyango lwendalo - ngaphandle kwemiphumo emibi. Ngaphandle koko, sicebisa ukuba le mithambo mithandathu iqalise ukujikeleza kwegazi kwiingalo kusasa.
Funda: 6 Ukuzivocavoca ngokuchasene ne-Osteoarthritis yeBala
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho(nceda udibanise ngokuthe ngqo kwinqaku). Ukuqonda, ulwazi ngokubanzi kunye nokugxila okwandileyo ngamanyathelo okuqala obomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezinganyangekiyo.
Chukumisa oku ukuba wabelane ngakumbi. Umbulelo omkhulu kuye wonke umntu onceda ukukhuthaza ukuqonda okungcono kwe-fibromyalgia.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-smerter-på-morningen.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-07 17:19:172022-03-18 15:48:00I-Fibromyalgia kunye neNhlungu
Ukucaphuka kwe-fibro yokugrumba ngegrama ecd uthi:
Ukusa ligama lesiNgesi.
Iintlobo ezi-7 zeFibromyalgia Pain I-Fibromyalgia Flare-ups kunye neeTigger